Ireo mpanohana ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Ireo mpanohana ny Global Voices
Voadika ny 23 Jolay 2019 13:54 GMT
Te-hisaotra manokana an'ireto mpanohana ireto izahay:
John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, noho ny fanohanan'izy ireo hatrany ny Efi-baovao sy ny asa fototra.
Omidyar Network, noho ny fanohanan'izy ireo hatrany ny sehatra fitantanana ao aminay, ny Efi-baovao, sy ny Rising Voices.
The Open Society Foundations, noho ny fanohanan'izy ireo ny tetikasa famoahan-dahatsoratra Global Voices, anisan'izany ny RuNet Echo. Manohana ny GV Advocacy, Rising Voices, ny Technology for Transparency Network, ny asa fototra sy ny fihaonambentsika ihany koa izy ireo.
The Ford Foundation, noho ny fanohanan'izy ireo ny tetikasa fandikan-teny Lingua, Rising Voices, GV Advocacy, sy ny Fihaonambentsika.
Ny fikambanana tsy miankina Holandey Hivos no mpanohana lehibe ny Global Voices Advocacy ho amin'ny fahalalaham-pitenenana antserasera, Lingua, sy ny ekipan'ny famoahan-dahatsoratra.
Fisaorana manokana ho an'ny John S. and James L. Knight Foundation noho ny fanohanana tamin'ny nananganana ny Rising Voices, ny fanohanana ny Fihaonambentsika, ary ny Loka Knight-Batten Innovations tamin'ny Septambra 2006.
Natsangana ny Global Voices ho tetikasan'ny Foibe Berkman ho an'ny Aterineto sy ny Fiarahamonina ao amin'ny Sekolin'ny Lalàna Harvard. Nahatonga ny fisian'ny Global Voices ny fanohanan'izy ireo ara-bola sy ara-drafitra.
Te-hisaotra ireo mpanohana hafa ankehitriny sy taloha ihany koa ny Global Voices, ka anisan'izany ny: Mozilla Foundation, Google, Ny Google Digital News Initiative, UNESCO, Ny Wikimedia Foundation, ny Open Technology Fund, The Avina Foundation, Facebook, ny Media Development Investment Fund, Reuters, ny Adessium Foundation, Matt Mullenweg, ny McCormick Foundation, Ars Electronica, The New World Foundation, The Arca Foundation, Yahoo!, ny European Journalism Centre, ifocos, ary ny Outblaze.
Tongava ho lasa Mpamatsy ara-bola ho an'ny Global Voices
Raha liana te-hanampy hamatsy vola ny iraka ataon'ny Global Voices amin'ny fanangonam-baovao, fikaroham-baovao sy ny fanamafisana ny resadresaka antserasera manerantany ianao, dia mandefasa mailaka any amin'ny Tale Mpanatanteraka, Ivan Sigal.
3 ora izayDika
14 ora izayAngola
15 ora izayEoropa Andrefana
Vakio amin'ny teny 繁體中文, عربي, Español, 日本語, ភាសាខ្មែរ, English
Oktobra 2019 62 Lahatsoratra